Shiinaha Sides buufin warshad soo celinta iyo saarayaasha | Dingtaisheng
Afarta jiho ee buufinta lagu buufiyo ee lagu diyaarshay saxaarad kasta waxay ku gaari kartaa saameyn isku mid ah boos kasta oo saxaarad ah oo ku yaal lakabyada sare iyo hoose, hore, gadaal, bidix, midig, iyo in la gaaro tayada kululeynta iyo tayada jeermiska. Module xakamaynta heerkulka (nidaamka D-TOP) ee ay soo saartay DTS wuxuu leeyahay ilaa 12 marxaladood oo heerkulka lagu xakameynayo, talaabada ama qumanaanta waxaa lagu dooran karaa iyadoo la raacayo alaabooyin kala duwan iyo habka habka kululaynta habka, sidaa darteed soo noqnoqoshada iyo xasiloonida udhaxeysa alaabada si fiican ayaa loo kordhiyaa, heerkulka waxaa lagu xakameyn karaa gudaha ± 0.5 ℃.
Ku hay qaddar biyo ah oo ku habboon salka galka. Haddii loo baahdo, qaybtaan biyaha ah si otomaatig ah ayaa loogu duri karaa bilowga kululaynta. Alaabada kulul-buuxsan, qaybtaan biyaha ah waxaa lagu sii kululayn karaa marka hore haanta biyaha kulul ka dibna waa la isku mudayaa. Inta lagu guda jiro howsha nadiifinta oo dhan, qeybtaan biyaha waxaa lagu buufiyaa badeecada biyo balaaran oo qulqulaya iyo afarta jiho ee buufinta lagu buufiyo oo lagu diyaariyo saxaarad walboo alaab ah si loo gaaro isla saameyn isku mid ah booska saxaaradooda ee lakabyada sare iyo hoose , hore, gadaal, bidix iyo midig. Marka tayada kuleylka iyo nadiifinta ugu fiican ayaa la gaaraa. Sababta oo ah jihada afka loo marinayo ayaa ah mid cad, sax ah, midaysan oo baahsan biyo kulul ayaa laga heli karaa bartamaha saxaarad kasta. Nidaam ku habboon yareynta isku dheelitir la'aanta heerkulka ee haanta wax soo saarka ee soo celinta baaxadda weyn ayaa la gaaraa.
Saxan caag ah Kiish baakad dabacsan
Waxyaabaha caanaha laga soo buuxiyo oo lagu rakibo baakad dabacsan
Khudaarta iyo miraha (boqoshaada, khudaarta, digirta) oo ay ku jiraan baco jilicsan
Hilibka, digaaga oo ku jira bacaha baakadaha rogrogmi kara
Kalluunka iyo cuntada badda ee ku jira bacaha baakadaha rogrogmi kara
Cuntada carruurta ee ku jirta bacaha baakadaha rogrogmi kara
Cunnooyinka u diyaarsan in lagu cuno ee ku jira boorsooyinka baakadaha ee dabacsan
Cuntada xayawaanka lagu kariyo ee ku jira boorsooyin jilicsan
Hore: Cascade retort
Xiga: Dib-u-Celinta Biyaha
Multifunctional Biyaha lagu buufiyo Retort
Buufiyo Retter Jeerteeriyaha
Mashiinka Mashiinka Buufiyo
Mashiinka Mashiinka Dib-u-buufiya ee Bixinta